Hupenyu Husinganzwisisike: Dutu risati rasvika muna Gunyana 13 | Ndinobva mac
Hupenyu Hwakashamisa: Pamberi peDutu iri chikamu-chikamu chakamira chakasarudzika chakaiswa pamberi pemutambo wekutanga muBAFTA mubairo-unokunda akateedzana. Zvekare tave kuzozviisa mushangu dze Chloe Mutengo, musikana anopanduka ane makore gumi nematanhatu uyo anoumba hushamwari husingafungidzike naRachel Amber, mudzidzi anozivikanwa anoitirwa ramangwana rinobudirira.
Rachel anowana chakavanzika chemhuri chinotyisidzira kuparadza nyika yake uye anowana simba raanoda muhukama hwake hutsva naChloe. Pamwe chete, Chloe naRachel vachatarisana nemadhimoni avo emukati uye vawane nzira yekuakunda.
Chinhu chinonakidza mumutambo uyu ndechekuti kunyangwe chiri chokwadi icho Pamberi peDutu Uyu mutambo unoda kutarisisa kwako kwese, uchave unokwanisa kushanda pane angangoita ese maMac. Kuti uite izvi, zvakanakisa kuona zvavari izvo zvinodikanwa zveMac yedu kuitira kuti tikwanise kutamba mutambo nenzira kwayo. Tinoda 5GHz Intel Core i2.0 processor ine macOS 10.13.6, 8GB ye RAM, uye 650GB Nvidia 1M, 290GB AMD Radeon M2, kana kadhi yemifananidzo yeIntel Iris 5100, padiki. Mutambo unoenderana neese maMacs:
Ese Mac Minis akaburitswa kubva Kupera kwa2014
Ese gumi nematanhatu - MacBook Pros yakaburitswa kubvira 13
Ese gumi nemashanu ″ MacBook Pros yakaburitswa kubvira Mid 15 ine 2012GB mifananidzo kadhi kana zvirinani
Mid-2015 mamodheru anoshandisa AMD 370X haitsigirwe
MaMacs ese 21.5 released akaburitswa kubvira Gumi ra2013
MaMacs ese 27 released akaburitswa kubvira Gumi ra2013
Kunonoka 2012 mamodheru neNvidia 675 kana Nvidia 680 makadhi emifananidzo anotsigirwa
Zvese 27 ″ iMac Pros yakaburitswa kubvira Late 2017
Ese maMac Pros akaburitswa kubva Kupera kwa2013
Mutambo unogona zvakare kumhanyisa pane anotevera maMac, kunyangwe iwo asingaenderane nematanho anodikanwa kuti atsigirwe zviri pamutemo. Izvi zvinoreva kuti mutambo unogona kumhanya, asi unogona kusapa kuita kwakanyanya kuita, girafu, uye kugadzikana maficha
Ese Mac Minis akaburitswa kubva Kupera kwa2012
Ese maMacbook akaburitswa kubvira Kutanga 2015
Ese Macbook Mhepo dzakaburitswa kubva Mid Mid 2012
Ese gumi nemaviri-Macbook Pros akaburitswa kubvira Mid 13
Ese 21,5 .2013 iMacs yakaburitswa kubvira Kwokutanga XNUMX
Feral Inopindirana ichangobva kuzivisa kuuya kwemutambo uyu waGunyana 13, saka munhu wese akatarisa. Mutengo uri 24,83 euros uye unogona kutochengetedza zviri pamutemo mu Feral webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mitambo » Hupenyu Hwakashamisa: Pamberi peDutu, rinouya Nyamavhuvhu 13